Iinyanga ezili-11 - uphuhliso kunye nesondlo
Maternity Iintsana ezingaphantsi komnyaka omnye ubudala
Kuze kube ngumhla wokuqala wokuzalwa kwakho, enye inyanga isele isele, kwaye utshintsho lubonakala kwi-iso isohlwayo: ukusuka kwibhola elincinci elincinci le lonwabo, i-crumb yajika yaba ngumonde ongafunekiyo, owenza imihla ngemihla iyanelisekile ngabazali bayo impumelelo. Enyanisweni, ubomi bomntwana kusekho phantsi kolawulo oluqinileyo kunye nolawulo olusondeleyo lwabazali, ngoko oku kungayi kuba khona indawo yokubuza malunga neempawu zophuhliso kunye nesondlo somntwana kwiinyanga ezili-11.
Ukuphuhliswa kwengqondo kunye nengqondo yomntwana kwiinyanga ezili-11 ukuya ku-12
Xa umntwana ejika ezinyangeni ezili-11 ubudala, amaninzi kunye nabantwana bancwina ngokukhulula: ebudeni bedlula ubusuku obuthongo, ukutya okubusuku, abaninzi beli lixesha bathi bangabonakali kunye ne-diapers kunye ne-diapers. Kodwa, njengokuba kukho ukubonisa, ukuphumla akusiyo ixesha, kuba iindawo ezithandekayo kakhulu zizayo. Ukuphuhliswa kwengqondo kunye nomzimba kwinyanga ezili-11 ukuya ku-12 kugxininise ngokupheleleyo, ngoko ke, ukunakekelwa, ukondla kunye nezinye iinkalo ezinxulumene nokukhuliswa kweemvuthu kufuneka zihlale ziphambili kuzo zonke ezinye izinto ezibalulekileyo zabazali. Masiqale ngeempumelelo eziphambili zomntwana kwaye sitshintshe indlela yokuziphatha ngokuhambelana neemfuno ezintsha:
Kwiinyanga ezili-11 umntwana angashenxisa indlu ngokuzimeleyo: ukukhwela, hamba kunye nonina ngesibamba okanye ubambelele kwinkxaso. Ezinye iintsana sele zenza amanyathelo abo okuqala azinzileyo , azimeleyo. Ngokufanelekileyo, umsebenzi wabantu abadala - ukukhusela indawo, ukufihla zonke izinto eziyingozi ukusuka ekufikeleleni kwintsana, iimbombo ezibukhali kunye neziseko, vala iingcango.
Imisebenzi yezandla zentsana iphucula imihla ngemihla. Ukunyakaza okungakumbi kunomntwana okwenzayo, ukudlala ngamathoyizi: ngokukhawuleza ukwakha iinqaba ezivela kwiikhabhi, kususa iindandatho ezivela kwipiramidi, izikhonkwane ngeencwadi. Ngako oko, abazali kufuneka banikele ingqwalasela ngokufanelekileyo kulo mbandela wophuhliso: imidlalo ehlukahlukeneyo ekhuthaza ukuphuhliswa kwezakhono ezifanelekileyo zezithuthi aziyi kuba yinto enomdla kuphela kwiimvuthu, kodwa iyanceda kakhulu. Ngendlela, ngoku yisihlandlo sokufundisa umntwana ukuba atye kwindebe aze abambe isipuni.
Ngokuqinisekileyo, abaninzi abanomama nabazali sele benethuba lokuvavanya amakhono abo okwenza inzala yabo. Ewe, abantwana banabasebenzi abahle kakhulu, banomuzwa obuthathaka kakhulu kubazali babo kwaye basebenzise ngobuchule ukukhala nokukhwaza ukuze bafezekise into abayifunayo. Kakade ke, amaxesha anjalo kufuneka adalwe, kodwa akufanelekanga ukushiya ngokupheleleyo ukunganeliseki okukhulu kwintsana ngaphandle kokuqwalasela. Kule nqanaba lophuhliso, abazali mabafanele bachaze ngokucacileyo ukuba "akunakwenzeka", kwaye kungekho ngaphantsi kweyiphi na into yokuxhomekeka ekunyuseni, kwaye umgaqo "ongundoqo awukwazi" ufanele ulingane nawo onke amalungu entsapho.
Kufuneka ukuba uqaphele ukuba kwiinyanga ezili-11, abantwana bavakalelwa kukuba baxakeke kubo, ngakumbi abazali babo, baqonde izicelo, bavuya ngokunyanisekileyo ekudumiseni, bangachaza amagama alula kunye neelwimi ("umama", "utata", "utata", "ndinike", " "Kwaye unjalo). Ngoku kubalulekile ukugcina ubuhlobo obusondeleyo nomntwana, ngakumbi ukudumisa izicelo ezizalisiweyo kunye nempumelelo, ukuthetha rhoqo nomntwana, ubonise uthando nokunyamekela.
Urhulumente kunye nesondlo somntwana kwiinyanga ezili-11-12
Imenyu yomntwana oneminyaka eli-11 ubudala kufuneka ihluke. Ngokuqinisekileyo, kufuneka iqhubeke nobisi lobisi okanye umxube. Nangona kunjalo, le mveliso ayisekho isiseko sokutya, kodwa inokuthi ithathe indawo yokutya kwantambama nobusuku kuphela. Ukutya komntwana kwiinyanga ezili-11 kuhlala kathathu. Kwesidlo sakusasa sesibini, unako ukubonelela i-kid porridge, ngesidlo sasemini, nakanjani, upheke isobho, imifuno okanye iifatata ezifihliweyo, i-steak inyama okanye inyama ye-meatball. Ngomdlalo wokutya ophakathi kwentsasa, kukulungele ukunika umntwana i-kefir kunye nekiki kunye neziqhamo ze-puree. Epheleleyo kunye neyona nto kufuneka ibe yidli yeesana: i-porridge ene-salad yemifuno, i-cottage shiese okanye i-casserole, ihlangabezane ngokupheleleyo neemfuno ezikhulayo zenyama encinci. Isondlo somntwana kufuneka sihlale sisondlo: akukho mveliso yokutshaya, iziqhamo ezingabonakaliyo, ukutya okuthosiweyo kunye namafutha, kufuneka kulibaziseke ngokutya okugqithisileyo.
Imenyu esondeleyo yomntwana kwiinyanga ezili-11 kunye nohlu lweemveliso ezivumelekileyo zokutya ozibonayo kwitheyibhile elingezantsi.
Kwakhona, khumbula ukuba ukunyamekela umntwana weenyanga ezili-11 akuthethi nje ukutya okunokulinganisela, kodwa kubalulekile ukuphuhliswa: umbutho wobuthongo obugcweleyo, ukuhamba ngaphandle, iinkqubo zamanzi kwaye, ngokuqinisekileyo, ukuzonwabisa ngokusemgangathweni kunye nemidlalo yokuphuhlisa nemisebenzi.
I-herbilical hernia kwiintsana
Unyaka wokuqala wobomi bomntwana
Indlela yokuphuhlisa umntwana kwiinyanga ezili-10?
Umntwana akayidli inyama
I-neurogenic bladder ukungasebenzi kubantwana
Umntwana akayidli ilanga
I-pseudocyst yengqondo kwiintsana
Urhulumente wengxelo yomntwana kwiinyanga ezili-8
I-Hammock yokuhlamba iintsana
Indlela yokuphuhlisa umntwana kwiinyanga ezi-7?
Imvulophu yokukhutshwa esibhedlele
Umyeni akafuni ukusebenza - iingcebiso zengqondo yengqondo
U-Angelina Jolie waba ngumhlobo kunye noJohnny Depp
I-Kvass ene-chicory-recipe ye-5 litres
Kutheni sifuna amaphupha?
Inkqubo yokuchumisa iqanda
I-Stepper simulator - iklasi kwi-stepper yokulahleka kwesisindo
UBlake Lively noRyan Reynolds babonakala bevela kuqala kuluntu kunye nabantwana babini
Iingubo zokugcoba kwindlovu
I-Smear evela kumbhobho womlomo wesibeleko
I-beetroot yeCold iyindlela yokudala yasehlobo
Iibhola eziMnyama eziMnyama
I-multivark kunye nomsebenzi womenzi wesonka
Ukuncelisa ukuza kufikelela kwiminyaka emithathu-i-pros and cons
Indlela yokuvula i cafe yabantwana?
I-Plaque ngolwimi - izizathu
Izigqoko zaseTurkey 2013
I-Saladi kunye ne-salmon kunye neetatayi